अञ्जु पन्तले फ्यानलाई थुनाउँदा…
गायिका अञ्जु पन्तका हजारौं फ्यान छन् । धेरै फ्यान अञ्जका गीत मात्रै सुन्छन् । कतिपय फ्यान अञ्जुसम्म पनि पुग्छन् । आफूसम्म पुगेका फ्यानहरु र तिनीहरुका केही रमाइला किस्सा अञ्जुले डिबी खड्कालाई सुनाएकी छिन् ।...
पुलिसवालाले नचायो राजेश हमाललाई
नेपालगन्ज । बाँकेको कोहलपुरमा जारी ‘बृहत् मध्यपश्चिम अञ्चल सांस्कृतिक महोत्सव २०७१’ मा महानायक राजेश हमाल छमछमी नाचेर कोहलपुरवासीलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेका छन्। महोत्सवमा पुगेकी गायिका पूर्णकला बीसीले गाएको ‘पुलिसवालाले दिल चोरी लग्यो’ बोलको गीतमा महानायक...
मेघा लाइभ कन्सर्ट चुच्चेपाटीमा
काठमाडौं, १२ भदौ । फ्रेन्ज एण्ड ग्रुप इन्टरटेन्मेण्टले यही भदौ १४ गते मेघा लाइभ कन्सर्ट–२०१४ गर्ने भएको छ । हयात रेजेन्सीको खुला मैदानमा गर्न लागिएको उक्त कन्सर्टमा नेपालका चर्चित व्याण्डहरु सहभागी हुने आयोजकले बताएको...
किन रोए सुनिल थापा ?
‘राते काईला’ का नामले सबैले चिन्ने कलाकार हुन्, सुनिल थापा । सँधै भिलेनको भूमिका देखिने थापा मनका भने त्यति कठोर रहेनछन् । खुसी बाड्ँन आफैले काठमाडौेंको पाँचतारे होटल अन्नपूर्णमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सुनिल यसरी...
पुनमको सेक्सी तस्विर हेर्न सकेन फेसबुकले
भारतीय मोडल पुनम पाण्डेको फेसबुक अकाउन्ट फेसबुक कम्पनीले डि‍एक्टिवेट गरिदिएको छ । उनले निकै उत्तेजक तस्विरहरु सार्वजानिक गरेका कारण फेसबुकले उनको फेसबुक एकाउन्ट बन्द गरेको हुन सक्ने बताइएको छ । फेसबुक डिएक्टिवेट...
यी हुन लाजै लाग्ने तीजका गीत…
बिहान चिया खाँदै परिवारसँग बसेर नेपाल टेलिभिजनमा लोकगीत हेर्ने दर्शकले एउटा तीजको गीत आउँदा भने मुन्टो बटार्नुपर्छ । हातमा रिमोट हुनेको च्यानल चेन्ज गर्न पसिना छुट्छ । किनभने एउटा तीज भाकामा अभिनेत्री शुषमा कार्कीलाई बैंश...
हट पुनमलाई ‘आइस च्यालेन्ज’ (भिडियोसहित)
अचेल टाउकोमा बरफको बाल्टीन घोप्ट्याउने फेशन नेपालमा पनि खुब चल्या छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यो गर्मीमा बरफका केही टुक्रा टाउकोमा घोप्ट्याउने लहरले छोइसकेको छ । अभिनेत्री पुनम पाण्डे त यस्ता अवसरको खोजीमैं...
सुष्मा कार्कीले भित्री कपडा नै नलगाएपछि…
हट नायिकाको रुपमा कहलिएकी सुष्मा कार्कीको पहिरनका कारण पटपकटक चर्चामा आउने गर्छिन । अनेकन तिकडम गरिरहने यी नायिका सोमबार त झन् भित्री वस्त्र नै नलगाई एउटा कार्यक्रममा पुगिन् । उनलाई देख्नेहरु अचम्ममात्रै मानेनन्, लाजले...
श्रीकृष्णको वियोगमा स्वेताले यसरी पोखिन भगवानसँग बिलौना
काठमाडौँ, ९ भदौ । नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधनले वियोगमा डुबेकी अभिनेत्री स्वेता खड्काले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विलौना पोखेकी छिन् । बिहे गरेको ‍एक महिना नबित्दै श्रीमान् श्रीकृष्णलाई गुमाउनु परेको पीडालाई स्वेताले पहिलोपटक सामाजिक सञ्जालमार्फत...
गीतकार बने पत्रकार श्रेष्ठ
काठमाडौं । पत्रकार डम्बरकृष्ण श्रेष्ठको नयाँ परिचय पनि थपिएको छ । खोजमुलक पत्रकारितामा जमेका डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ ‘अनुशील’ गीतकार पनि हुन् । अनुशीलकै सहयोगमा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा ‘आरोही’ अल्बम मार्फत नयाँ गायिकाको आगमन भएको छ...
मायाको भुलभुलैयामा नीताले पिइन् विष
प्रेम पीडाका कारण नायिका नीता ढुंगानाले विष सेवन गरिन् । विचरा बुबाआमाले के गरून् ? हतार–हतार लगे हस्पिटल । जीवनमरणको दोसाँधको अवस्थामा पनि नीता प्रेमपीडामै तड्पिरहेकी थिइन् । होस् फर्किएपछि पनि उनी आमाबाबुलाई प्रेमीबारे...
कस्ले गरायो शंकर र पार्वतीको पुनर्मिलन ?
यसपालिको तीजमा सँगै नदेखिएका चर्चित मोडल शंकर बिसी र पार्वती राईको पुनर्मिलन भएको छ । यो जोडीलाई फेरि पुनर्मिलन गराएको हो, बुद्धिमान घिसिंगको गीत चाहियो जागिर हुने बोलकको गीतले । आइतबार सुटिंग भएको यस...
« 1 … 445 446 447 448 449 … 464 »